Iifoto eziBukhoma ziza kubuso beXesha leMacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
Sele beyitshilo kwi-WWDC yokugqibela, inkqubo yokusebenza ye-Mac iya kuba yenye yezona zizinzileyo nezinamandla ezibonisiweyo ukuza kuthi ga ngoku. Ngoku ligama layo kuphela elisenze sanomdla koko bakuxelayo kamva kwinkcazo, ukuba iMacOS Sierra ayifi kwaye izakuphuculwa ngakumbi, ibe yiSierra ephezulu.
Baye bayihlaziya kwaye bayiphucula inkqubo yokusebenza yangoku efikelela kuguqulelo olutsha, yona kunye nezixhobo ezitsha ezibonisiweyo Iza kubamba iicomputer zeApple ziye phezulu ekusebenzeni nasekuveliseni.
Idatha sele iqala ukuvela kwiindaba zokuba u-Apple khange athethe ngqo. Kwinguqulelo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra, isicelo seFoTime siza kufika neendaba. Masingacingi ukuba incoko phakathi kwabasebenzisi abaliqela ekugqibeleni ifikile kwaye i-Apple isekhona ayiniki miqondiso ngalo mbandela. Kule meko, into ephunyeziweyo yinto enokwenzeka yokuba nayo Iifayile eziPhila kwiFaceTime.
Ngale ndlela, xa abasebenzisi ababini bekwincoko ye-FaceTime, baya kuba nakho ukuthatha imifanekiso kwincoko efanayo. baya konga ixesha ngaphambi kokuhamba kunye nesandi esenzeka kwincoko, oko kukuthi, iiFoto eziBukhoma.
Ngaphandle kwamathandabuzo iindaba zokuba ezinye ziya kuhamba zingabonakali, kodwa kwabanye kuya kuba yinto efanelekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Ukukuxelela inyani, andinguye fan omkhulu weeFoto eziBukhoma kwaye andihlali ndizisebenzisa kwi-iPhone yam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Iifoto eziBukhoma ziza kubuso beXesha leMacOS ePhakamileyo yeSierra